आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित |
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित
On: २०७६ असार ११ गते, बुधबार, १०:०७ बजे प्रकाशित
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव राखे पनि बहुमतले पारित भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट पेस ल्याएका थिए । आगामी वर्षका लागि उनले चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब, पुँजीगतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब तथा वित्तीयतर्फ १ खर्ब ६७ अर्बसहित १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ९८ अर्ब अन्तर्रा्ष्ट्रिय ऋण र ५७ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले १९५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको छ । सांसदले बजेट बढाउने नाममा विदेशी ऋण थप्ने काम सरकारले गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले घिउ पिउनका लागि नभई विकास गर्न ऋण लिन लागिएको बताए जवाफ दिए ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुनेः गोर्खा भूपू सैनिकको नागरिकता निरन्तरता माग
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७६’ माथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजीगत खर्च गर्नकै लागि ऋण लिएको प्रस्टोक्ति दिए । राष्ट्र ऋण उठाउनेसम्बन्धी विधेयकका विषयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले हरेक वर्ष विदेशी ऋण थपिँदै गएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा मात्र ऋण उठाउनुपर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएपछि त्यसको प्रतिफल पनि हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
२०७६ असार ११ गते, बुधबार, १०:०७ बजे प्रकाशित
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा कोरोनामुक्त
आज काठमाडाैं उपत्यकामा मात्रै १ हजार ५३५ जनामा कोरोना संक्रमण
२४ घण्टामा २ हजार ८५६ संक्रमित थपिए: ३ हजार ३३६ जना घर फर्के
आईपीएल: पहिलो खेलमा चेन्नई र बेंग्लोर भिड्दै
एल क्लासिको: रियल मड्रिड ३-१ ले विजयी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ हजार ६४५ पुग्यो
आईपीएल: आज दुई खेल हुँदै